Atletico Madrid Oo Cabasho Ka Muujiyey Go’aamadii Rikoodheyaasha Lagu Siiyey Ciyaartii Xalay Ee Levante – Cadalool.com
Atletico Madrid Oo Cabasho Ka Muujiyey Go’aamadii Rikoodheyaasha Lagu Siiyey Ciyaartii Xalay Ee Levante
Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa cabasho ka muujisay go’aamadii rikoodheyaasha lagu siiyey Real Madrid oo ay deris yihiin, kulankii xalay ay 2-1 kaga adkaadeen Levante oo ay marti u ahaayeen.
Kubbad uu soo laagay Luka Modric ayaa Real Madrid ay qaybtii hore ku heshay rikoodhe, waxaana garsooraha ka caawiyey muuqaalka VAR oo ku wargeliyey gacanta, waxaana kubbadaas gool u beddelay Karim Benzema.
Levante oo imtixaan adag ku ahayd Real Madrid ayaa qaybtii dambe dhashatay gool barbar-dhac ah, hase yeeshee daqiiqaddii 77aad ayaa mar kale rikoodhe loo dhigay Los Blancos, waxaana dhaliyey Gareth Bale.
Labada rikoodheba, waxa Real Madrid ka caawiyey muuqaalka VAR, hase yeeshee, waxa muran ka dhashay goolka labaad oo Casemiro khalad lagu galay.
Levante ayaa aad uga doodday khaladka uu garsooruhu dhigay, waxaanay ku doodeen in aanay cidina taabanin laacibka reer Brazil, sida xaqiiqadu ahayna may jirin taabasho weyn oo ku dhacday, hase yeeshee waxa uu nasiib u yeeshay in rikoodaha la siiyo.
Kooxda ka dhisan magaalada Madrid ee Atletico oo ay deris yihiin Real Madrid, ayaa barta Twitterka eedayn ugu jeedisay go’aamada garsooreyaashu fursadda ku siiyeen Real Madrid, waxaana qoraal ay dabacday ay ku tidhi: “Waxa bilaabmay habeenkii billadaha waaweyn. Waa sheeko aan dhamaad lahayn.”
Atletico Madrid oo sidoo kale cabasho ka muujisay go’aamadii garsooreyaasha ee kulankii ay la yeelatay Real Madrid horraantii bishan ayaa waxay tuhunsan tahay in Los Blancos ay kaalmo ka heshay garsooreyaasha.